Indlela yokuvula i-clean cleaner
Imveliso yokucoca ngokucokisekileyo ngokukodwa kwiminyaka ukuzisa indawo enkulu yenzuzo, inokuhlala ikhangele inani elikhulu lokucoca iindawo zokucoca izitishini. Kodwa ngubani owaziyo ukuvula ivenkile elungileyo imveliso yokucoca? Isitya sokucoca i-dry to join? Kholelwa ukuba abaninzi abahlobo banokungabaza, masilandele iingcali zeemarike ukuba sifunde ngale ngongoma yolwazi.
Isitya sokucoca ngokucokisekileyo i-shop kulula ukuyisebenzisa le projekthi ngokwayo, ukuhlamba umsebenzi kumatshini womatshini, umgaqo-nkqubo ungoxanduva lokunxibelelana kwabathengi kunye nolungiselelo lomsebenzi. Kodwa njengokuba inkonzo yexabiso lemarike kunye nokukhuphisana phakathi kweentengiso, wonke umntu uya kubeka ingqalelo ngakumbi kwi-shishini lolawulo.
Ubomi bunjani ubomi obumileyo bokucoca ivenkile? Imodeli yo shishino kuqala, ungaqala. Abathengi banamhlanje banokuthi bamkele inkonzo yecandelo lokuhlamba impahla, ngoko xa uvula ivenkile unokukhetha uhlobo olunjalo lwezoshishino, ngakwesinye isandla kukuphucula ukuthengiswa kweemarike, kwaye wenze inzuzo eninzi yokucoca ivenkile.
Isitya sokucoca i-dry to make money
Kwakhona, isicatshulwa sokucoca izinto zokusebenza zesevenkile, ngoko ke iicandelo zengcali zibonisa ukuba sithenga izixhobo ezithile zobugcisa. Ngokomzekelo, unokukhetha ezi zixhobo ezinkulu zokucoca umatshini wokucoca, ngakwesinye icala, ukuqinisekisa ukuba umgangatho wokuhlamba kunye nomsebenzi wokuhlamba unceda.
Ngamanye amaxesha izixhobo zokucoca ezinomileyo kwimisebenzi yesitolo, zinokuhlangabezana nabanye abathengi abaphikisana neengxaki, ngeli xesha azizami nzima, kulunge ukufumanisa ingxaki ngexesha, oko kukugwema into ethile ukulimaza iimfuno zesitolo.
Inqaku lokugqibela: Ubomi beenkonzo zokuhlamba iim...
Inqaku elilandelayo: Izixhobo zokuhlamba iimpahla z...